बिक्रम राई सवार कार दुर्घटना भयो!!
हिजो मधुमल्ला महोत्सब सकेर बिर्तामोड फर्किदा राती १२ बजे सुरुङामा विल्सन बिक्रम राई सवार कार एक्कासी अगाडी आएको कुकुर लाई बचाउन खोज्दा दुर्घटना भयो!!उक्त कारमा सवार फुर्के न. १ का कलाकार हरु बिशाल लिम्बु (फर्सी टाउके) युकेश लिम्बु, समिल राई, बाल कलाकार जेसिका राई समेत थिइन!! सबै जना सकुसल भएको जानकारी गराउदछु!! नया जिवन प्राप्त […]
– सन्तोष तामाङ नेपाली चलचित्रहरुले राम्रो व्यवसाय गर्न नसक्नुका पछाडि धेरै कारणहरु छन् । ती धेरै कारणहरु मध्ये प्रदर्शनको क्रममा एक अर्कासँग जुध्नु पनि प्रमुख कारणको रुपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा जम्मा ५० वटा सिनेमाहलहरु मात्र सञ्चालनमा छन् । यसरी सञ्चालित ५० वटा सिनेमाहलहरुमा करिब १०० वटा पर्दाहरुमात्र छन् । जब कुनै हप्ता […]
काठमाडौं, २०७१ चैत्र ३० – हरेक बर्षलाई भित्तामा झुण्डिएको क्यालेन्डरलाई फेर्दै गर्दा हामी व्यक्तिगत, समाज, देश अनि विश्वको समिक्षा गर्छौ । कहिलेकाहीँ क्यालेण्डरसँगै मानिसको जीवन पनि फेरिन्छ । तर, विगत केही बर्षदेखिको आँकडा हेर्ने हो भने नेपाली फिल्मका लागि क्यालेन्डर फेरिनु बाहेक अरु केही पनि देखिएको छैन । बर्षभरिको क्यालेन्डर पल्ट्याउदै हेर्ने हो भने नेपाली फिल्म […]
मनोज थापा काठमाडौं/ गत बैशाख १२ गते गएको भूकम्पले नेपाली चलचित्र उद्योग पूर्णरुपमा बन्द भएको छ । जति अन्य क्षेत्रलाई असर गरेको छ त्यो भन्दा बढि नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई गरेको छ । चलचित्र हलहरु पूर्णरुपमा बन्द छ भने चलचित्र सम्बन्धि गतिबिधि पनि ठप्प छ । हुन त देश आज संकटग्रस्त स्थितिमा रहेको बेला नेपाली चलचित्र […]
आमिर खानको नयाँ चलचित्र दंगल यतिबेला निमार्णाधिन अवस्थामा
आमिर खानको नयाँ चलचित्र दंगल यतिबेला निमार्णाधिन अवस्थामा छ । उनको चलचित्र क्रिसमशमा रिलिज हुने बताइएको छ । यता, सलमान खान अभिनित चलचित्र सुल्तान ईदको मौकामा प्रदर्शनमा आउँदैछ । aamir-salman_650_122013042728रोचक कुरा, यसपटक दुई स्टारको अभिनय रहेका दुई फरक चलचित्रका कथावस्तु उस्तै छन् । आमिर खानको दंगल कुश्तीमा आधारित छ । उनले चलचित्रमा पहलमान फोगाटको भूमिका […]